The Voice Myanmar Season-3 ကထွက်သွား ရလို့ ပရိသတ်တွေ အတွက် တာဝန်မကျေ ခဲ့ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဂျပန်ကြီး – Cele Posts
The Voice Myanmar Season-3 ကထွက်သွား ရလို့ ပရိသတ်တွေ အတွက် တာဝန်မကျေ ခဲ့ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဂျပန်ကြီး
The Voice Myanmar Season-3 သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု တစ်ခဲနက်ရရှိထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်ကြီး ကတော့ မနေ့ညက ထုတ်လွှင့်ပြသ ခဲ့တဲ့ Knock Outs Round မှာပဲ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ ခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကြီးကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့ ကနေ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သူဖြစ်ပြီး Blind Audition မှာကတည်းက စစ်သူ ရဲ့ ငါ့ဘဝ သီချင်းနဲ့ ဒိုင်လေးဦးစလုံး လှည့်ကြည့်ခြင်းကို ရရှိခဲ့သူပါ။
Battle Round မှာတော့ Team ကျားပေါက် အဖွဲ့ဝင် အနေနဲ့ တွမ်ပီးနဲ့အတူ Battle သီဆိုခဲ့ ရတာဖြစ်ပြီး ဒိုင်ဖြစ်သူကျားပေါက်ရဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း မရရှိခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်တစ် ဦးဖြစ်သူ ရန်ရန်ချန်း Steal လုပ်ခဲ့ တာကြောင့် Knock Outs Round တက်လှမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညက ထုတ်လွှင့်မှု မှာတော့ Team YC အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ ဂျန်ဂျန်၊ နော်ဂျာလေး၊ မိုးသား တို့နဲ့အတူ ယှဉ်ပြိုင်သီဆိုခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ ထုံးစံအရ ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှာ ဂျန်ဂျန်နဲ့ မိုးသား တို့က ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်ကြီးကတော့ ပြိုင်ပွဲအစကတည်းက ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရထားသူပီပီ သူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတော့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ် ခဲ့ကြသလို သူကိုယ်တိုင် လည်း အခုလိုမျှော်လင့် ထားသလို ဖြစ်မလာတဲ့အပေါ်မှာ
ဦးစွာThe Voice Myanmar ကိုလာရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ အဖေနဲ့အမေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ…. The Voice Myanmar Season3 ကနေထွက်ခွာ သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ လုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဗျ… အခုချိန်ထိ အားပေးခဲ့တာကိုကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ဗျ …. အများကြီးမျှော်လင့်ပြီး အားပေးခဲ့ကြပါတဲ့ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့အမေ ပြီးတော့အမျိုးတွေရယ် ညီအကိုမောင်နှမတွေရယ် ဆူရှီတွေ ရယ်ကို တာဝန်မကျေသလိုဖြစ်ခဲ့ပြီဗျာ စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီချင်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးစား သွားပါ့မယ်ဗျ သီချင်းချစ်သူတွေ အတွက် သီချင်းတွေနဲ့ဆက်ရှိနေ ပါအုံးမယ်ဗျာ ဆိုပြီးတော့လည်း ကတိပေးခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
The Voice Myanmar Season-3 ကထှကျသှား ရလို့ ပရိသတျတှေ အတှကျ တာဝနျမကြေ ခဲ့ကွောငျး စိတျမကောငျးစှာ ပွောပွခဲ့တဲ့ ဂပြနျကွီး
The Voice Myanmar Season-3 သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ ပရိသတျအားပေးမှု တဈခဲနကျရရှိထားတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဂပြနျကွီး ကတော့ မနညေ့က ထုတျလှငျ့ပွသ ခဲ့တဲ့ Knock Outs Round မှာပဲ နှုတျဆကျထှကျခှာ ခဲ့ရပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျကွီးကတော့ စဈကိုငျးတိုငျး ကလေးမွို့ ကနေ လာရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ သူဖွဈပွီး Blind Audition မှာကတညျးက စဈသူ ရဲ့ ငါ့ဘဝ သီခငျြးနဲ့ ဒိုငျလေးဦးစလုံး လှညျ့ကွညျ့ခွငျးကို ရရှိခဲ့သူပါ။
Battle Round မှာတော့ Team ကြားပေါကျ အဖှဲ့ဝငျ အနနေဲ့ တှမျပီးနဲ့အတူ Battle သီဆိုခဲ့ ရတာဖွဈပွီး ဒိုငျဖွဈသူကြားပေါကျရဲ့ ရှေးခယျြခွငျး မရရှိခဲ့ပမေယျ့ ဒိုငျတဈ ဦးဖွဈသူ ရနျရနျခနျြး Steal လုပျခဲ့ တာကွောငျ့ Knock Outs Round တကျလှမျးခှငျ့ရရှိခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ မနညေ့က ထုတျလှငျ့မှု မှာတော့ Team YC အဖှဲ့ဝငျတှအေနနေဲ့ ဂနျြဂနျြ၊ နျောဂြာလေး၊ မိုးသား တို့နဲ့အတူ ယှဉျပွိုငျသီဆိုခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့ ထုံးစံအရ ပွိုငျပှဲဝငျနှဈဦးကိုသာ ရှေးခယျြခဲ့ရာမှာ ဂနျြဂနျြနဲ့ မိုးသား တို့က ရှေးခယျြခံခဲ့ရပါတယျ။ ဂပြနျကွီးကတော့ ပွိုငျပှဲအစကတညျးက ပရိသတျအားပေးမှု အခိုငျအမာရထားသူပီပီ သူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတော့ ပရိသတျတှေ အားလုံးက စိတျမကောငျးဖွဈ ခဲ့ကွသလို သူကိုယျတိုငျ လညျး အခုလိုမြှျောလငျ့ ထားသလို ဖွဈမလာတဲ့အပျေါမှာ
ဦးစှာThe Voice Myanmar ကိုလာရောကျ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ပေးတဲ့ အဖနေဲ့အမကေို ကြေးဇူးတငျပါတယျဗြ…. The Voice Myanmar Season3 ကနထှေကျခှာ သှားခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ ကိုယျကွိုကျတာတှေ လုပျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျဗြ… အခုခြိနျထိ အားပေးခဲ့တာကိုကြေးဇူး အထူးတငျပါတယျဗြ …. အမြားကွီးမြှျောလငျ့ပွီး အားပေးခဲ့ကွပါတဲ့ ကြှနျတေျာ့အဖနေဲ့အမေ ပွီးတော့အမြိုးတှရေယျ ညီအကိုမောငျနှမတှရေယျ ဆူရှီတှေ ရယျကို တာဝနျမကသြေလိုဖွဈခဲ့ပွီဗြာ စိတျမကောငျးစှာ ရေးသားမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သီခငျြးတှနေဲ့ဆကျပွီးကွိုးစား သှားပါ့မယျဗြ သီခငျြးခဈြသူတှေ အတှကျ သီခငျြးတှနေဲ့ဆကျရှိနေ ပါအုံးမယျဗြာ ဆိုပွီးတော့လညျး ကတိပေးခဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
ငယ်ဘ၀ ပုံရိပ်လေး တွေကို ပရိသတ်တွေဆီ ပြန်လည် ပြန်မျှဝေ လာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်
တန်ဖိုးကြီး နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတစ်လုံး လက်ဆောင်ရလို့ ပျော်နေတဲ့ ရတနာဗိုလ်
သူမရဲ့အရမ်းချစ်ရတဲ့ သမီးလေးကို မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့...
ငယ်ရွယ်ပေမယ့် ဘာသာတရားအရမ်းလုပ်ပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့...
ပရဟိတအသင်းတွေအတွက် နေ့လည်စာ ထမင်းဘူးတွေကို...
သူမရဲ့အရမ်းချစ်ရတဲ့ သမီးလေးကို မိခင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သီချင်းလေးဆိုပြီး ချော့သိပ်နေတဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံနေရကာ အရေးပေါ်အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေတဲ့ ချစ်သူအောင်လအတွက် အကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
သူမရဲ့ဖခင်ကြီးကို နောက်ိဆုံးအချိန်တောင်တွေ့ခွင့်မရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ ခံစားချက်တွေရေးသားလာတဲ့ ထားထက်ထက်
ငယ်ရွယ်ပေမယ့် ဘာသာတရားအရမ်းလုပ်ပြီး လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ သမီးလေးကို ဗီဒီယိုလေးခိုးရိုက်ပြီး ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ စိုင်းလွှမ်း
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အားအင်ပြန်လည်ပြည့်ဝစေဖို့ ကြက်ပေါင်းစွပ်ပြုတ် လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူလေးမှာတတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖူးဖူး